Omume MarTech nke na -ebute mgbanwe dijitalụ | Martech Zone
Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ahịa maara: n'ime afọ iri gara aga, teknụzụ ahịa (Martech) agbawala na uto. Usoro uto a agaghị adalata. N'ezie, ọmụmụ 2020 kachasị ọhụrụ na-egosi na agafeela Ngwá ọrụ teknụzụ ahịa 8000 na ahịa. Ọtụtụ ndị na -ere ahịa na -eji ihe karịrị ngwaọrụ ise n'otu ụbọchị, yana ihe karịrị 20 n'ozuzu ha na -eme atụmatụ ahịa ha.
Usoro ikpo okwu Martech na-enyere aka azụmaahịa gị ma nwetaghachi ego ahụ ma nyere gị aka inweta mmụba dị ukwuu na ahịa site n'ịkwalite njem ịzụ ahịa, ịmawanye mmata na inweta, yana ịbawanye uru nke onye ahịa ọ bụla.
60% nke ụlọ ọrụ chọrọ ịbawanye mmefu ha na MarTech na 2022 iji mee ka ROI azụmahịa ha dị okpukpu abụọ.
Nnọọ, Ọnọdụ Martech dị elu maka 2021
77% nke ndị ahịa na-eche MarTech bụ ọkwọ ụgbọ ala na -egosi uto ROI, na mkpebi kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ime bụ ịhọrọ ngwa MarTech ziri ezi maka azụmahịa ha.
Nnọọ, Martech dị ka onye na -akwado atụmatụ
Anyị achọpụtala usoro teknụzụ ịre ahịa isi ise. Kedu usoro ndị a, kedu ka itinye ego na ha ga-esi meziwanye ọnọdụ gị n'ahịa n'ọnọdụ akụ na ụba na-efe efe nke na-enweghị isi taa mgbe COVID-5 gasịrị?
Usoro 1: Ọgụgụ isi Artificial na mmụta igwe
Nkà na ụzụ akwụsịbeghị. Amamịghe echiche (AI) nọ n'ọkwa mbụ n'etiti mmadụ niile usoro teknụzụ ahịa ahịa. Ma ị na -ezube azụmaahịa ma ọ bụ ndị na -azụ ahịa, ndị na -ere ahịa na -achọ ngwaahịa ọhụrụ ma na -anụ ụtọ ọganihu teknụzụ.
72% nke ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa kwenyere na iji AI na -emezi usoro azụmahịa ha. Na, dị ka nke 2021, ụlọ ọrụ emefuola karịa $ 55 ijeri na ọgụgụ isi nke azịza ahịa ha. A na-atụ anya na ọnụọgụ a ga-abawanye site na ijeri abụọ.
Taa AI na ML nwere uru abụọ bụ isi maka ọrụ ịntanetị niile:
Ikike ime nyocha ọgụgụ isi, nke ga -enye ohere itinye mmezi dị irè karị
Ikike iji hụ na arụmọrụ kacha dị elu
Ndị isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi niile, gụnyere Instagram, YouTube, na Netflix, na -eme AI na Mmụta igwe (ML) algọridim iji chọpụta na wepụta ọdịnaya nke nwere ike ịdọta nlebara anya onye ọrụ.
N'ime afọ ole na ole gara aga, omume ML dị ka chatbots abụrụla onye ndu zuru oke n'etiti ụdị ndị America.
Mpaghara ọzọ na-eto ngwa ngwa bụ nkata nkata AI na-ebute. A chatbot bụ ngwa dijitalụ nke nwere ike gbasaa kọntaktị gị nke ukwuu. Ha na-anakọta ma nyochaa data bara uru n'aka ndị ahịa, jụọ ndị ọbịa ajụjụ dị iche iche dị mkpa, na-enye ngwaahịa na nkwalite ọhụrụ. Na 2021, ihe karịrị 69% nke ndị ahịa na United States nwere. na -emekọrịta ihe na ụdị site na chatbots. Chatbots na -adọta ndị ahịa ma na -agbakwa mbọ - yana nkwalite na arụmọrụ nnweta sitere na +25% na -abata na nsonaazụ abụọ.
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị obere na ndị na-ajụ obere azụmaahịa - n'ọchịchọ ha ịchekwa ego - anabatabeghị chatbots… na-efunahụ ndị na-ege ntị nwere ike ịba uru. Ka chatbots wee rụọ ọrụ nke ọma, ha agaghị adị mkpa itinye aka na iwe. Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ ndị tinyeworo ihe ize ndụ nke ịkparịta ụka n'ike n'ike akpasuwo ndị ahịa ha iwe ma mee ka ha bụrụ ndị asọmpi. Ekwesịrị iji nlezianya tinye ma nyochaa atụmatụ nkata gị.
Ụdị nke abụọ: Nchịkọta data
Nchịkọta data bụ azụmaahịa azụmaahịa nke azụmaahịa nke abụọ na -etinye nnukwu ego na ya. Nnyocha ziri ezi na nha dị oke mkpa iji nweta ozi azụmaahịa dị mkpa site na sistemụ ngwanrọ. N'oge ugbu a, ụlọ ọrụ na -eji sọftụwia ngwanrọ dịka Board, Amụ nwa, na Clear Akụkọ to:
Mmepe nke Dashboards mmekọrịta
Wụpụta Akụkọ Dị Iche Iche
Ntụle dị elu a na-enyere aka iji atụmatụ ụlọ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma ma na-ebuli mkpebi azụmahịa ka mma ngwa ngwa na karịa.
Nchịkọta data na -achọsi ike n'ụwa nke oge a. Ọ na -enye ụlọ ọrụ ohere ịnweta data nyocha na -enweghị nnukwu mbọ. Site na ịwụnye otu ikpo okwu akọwapụtara nke ọma, ụlọ ọrụ etinyelarị aka na usoro ịnakọta data iji melite ogo. Agbanyeghị, echefula banyere ihe mmadụ na -emekọrịta na nyocha data. Ndị ọkachamara n'ọhịa ha kwesịrị iji data enwetara na usoro a.
Ụdị nke atọ: Amụma azụmahịa
Ọmụma azụmahịa (BI) bụ usoro ngwa na teknụzụ ahịa nke na-enye gị ohere ịnakọta data maka nyochaa usoro azụmahịa ma mee ngwa ngwa nke ngwọta na-arụpụta ihe.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke obere azụmaahịa na obere ọkara na-eji ọgụgụ isi azụmaahịa na mmezu ahịa ha na mmepe atụmatụ.
Sisense, State of BI & Report Report
Mmejuputa azụmahịa BI na -agbago 27% na 2021. Mbuli a ga -eto ebe ihe karịrị 46% nke ụlọ ọrụ kwuru na ha na -ahụ sistemụ BI dịka ohere azụmaahịa siri ike. N'afọ 2021, ndị nwere azụmaahịa nwere ndị ọrụ 10 ruo 200 kwuru na ihe ha lekwasịrị anya mgbe oria ojoo COVID-19 tụgharịrị na BI dịka ụzọ isi lanarị.
Ịdị mfe iji na -akọwa ewu ewu nke ọgụgụ isi azụmaahịa n'etiti azụmaahịa niile. Ọ dịghị mkpa maka mmemme mmemme iji nagide ọrụ a. Ngwanrọ BI na 2021 gụnyere ụfọdụ ọrụ dị mkpa, dịka:
Dọrọ na dobe njikọta nke na -achọghị mmepe.
Ejiri amamihe na nyocha amụma
Nhazi asụsụ ngwa ngwa (NLP)
Isi ihe dị iche n'etiti nyocha azụmahịa bụ inye nkwado n'ime mkpebi azụmahịa kpọmkwem na inyere ụlọ ọrụ aka ịzụlite. Ọzọkwa, nyocha data na-enye gị ohere ịkọ ma gbanwee data n'ime mkpa azụmahịa.
Usoro 4: Nnukwu data
Nnukwu data bụ ụzọ zuru oke maka ịnakọta ozi karịa nyocha data. Isi ihe dị iche n'etiti nnukwu data na nyocha data na -arụ ọrụ yana usoro data dị mgbagwoju anya nke sọftụwia ọdịnala enweghị ike ịrụ.
Isi uru nke nnukwu data bụ igosi isi ihe mgbu ụlọ ọrụ, nke ha kwesịrị itinyekwu mgbalị ma ọ bụ tinye ego ka ukwuu iji nwee ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu. 81% nke ụlọ ọrụ na -eji nnukwu data gosipụtara mgbanwe dị ukwuu na ụzọ dị mma.
Nnukwu data na -emetụta isi ahịa ụlọ ọrụ dị mkpa dị ka:
Ịmepụta nghọta ka mma nke omume ndị ahịa na ahịa
Ịzụlite ụzọ dị irè iji meziwanye atụmatụ ụlọ ọrụ
Ịghọta ngwá ọrụ bara uru nke na -abawanye arụpụta ihe
Ịhazi aha na Ịntanetị site na iji ngwaọrụ njikwa
Agbanyeghị, nnukwu nyocha data bụ usoro dị mgbagwoju anya nke ekwesịrị ịkwadebe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bara uru ịhọrọ n'etiti ụdị nnukwu data abụọ n'ahịa:
Akụrụngwa dabere na PC nke a ga-etinye n'ọrụ n'ime akụrụngwa dịka Hadoop, Atlas.ti, HPCC, Plotly
Ngwanrọ dabere na igwe ojii maka ịgbakọ arụmọrụ ahịa yana nyocha n'igwe ojii dịka Skytree, Xplenty, Azure HDInsight
Ọ dịghị mkpa ka e yigharịa usoro mmejuputa iwu. Ndị isi ụwa aghọtala ogologo oge ka nnukwu ụbọchị si emetụta azụmahịa nke ọma. Ihe atụ dị ịrịba ama bụ nnukwu nkwanye Netflix, nke, site n'enyemaka nke nnukwu data maka ịkọ arụmọrụ na imeziwanye mma, na-echekwa ihe karịrị ijeri $ 1 kwa afọ.
Usoro nke ise: Ụzọ mkpanaaka-mbụ
Anyị enweghị ike were ndụ anyị na -enweghị ekwentị mkpanaaka. Ndị ọchụnta ego anọghị na -elebara ndị ọrụ ama ama anya. Na 2015, Google na-ese onyinyo ọnọdụ ọgbara ọhụrụ, na-ewepụta algọridim mkpanaka mbụ iji kwado ụdị mkpanaka weebụsaịtị. Azụmahịa ndị na-enweghị saịtị dị njikere maka ekwentị furu efu na nsonaazụ ọchụchọ ekwentị.
Na Machị 2021, ọkwa ikpeazụ nke ndepụta Google maka ngwaọrụ mkpanaka bịara n'ike. Ugbu a bụ oge ndị ọchụnta ego ga -ewebata ngwaahịa na weebụsaịtị ha maka ịntanetị.
Banyere 60% nke ndị ahịa alaghachila na saịtị nwere ụdị mkpanaka na-adịghị mma. Ndị ọchụnta ego kwesịrị ime ihe niile enwere ike iji bulie ma melite ụdị ngwaahịa ha n'akụkụ niile. Na 60% nke ndị na -eji smartphone akpọtụrụ azụmahịa ahụ ozugbo site na iji nsonaazụ ọchụchọ.
Ọnọdụ ekwentị mkpanaaka na-ejikọ na ML, AL, na NLP n'iji nyocha olu. Ndị mmadụ na-anakwere ọchụchọ olu ngwa ngwa iji chọta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'ihi na ọ na-eto eto ziri ezi yana ịdị mfe iji.
Ihe karịrị 27% ndị mmadụ n'ụwa niile na -eji nyocha olu na ngwaọrụ ha. Gartner gosiri na 30% nke nnọkọ ịntanetị niile gụnyere ọchụchọ olu na njedebe 2020. Otu onye ahịa na -ahọrọkarị ọchụchọ olu iji dee. Yabụ, itinye nyocha olu na webụ na ụdị mkpanaka gị ga -abụ nnukwu echiche na 2021 na karịa.
Ndị na -eme mkpọtụ, ihe niile ịchọrọ ịma gbasara teknụzụ ahịa
Na -eme atụmatụ mgbanwe gị…
Teknụzụ ahịa na -aga n'ihu n'ike n'ike. Maka azụmaahịa dị iche iche ga-eme nke ọma, nyocha na akụrụngwa dị elu dị mkpa iji dọta ndị ọrụ n'akụkụ ha. Na -a attentiona ntị na usoro isi teknụzụ ndị a, ụlọ ọrụ ga -enwe ike ịhọrọ ihe ga -adịrị ha mma. Ụlọ ọrụ kwesịrị ibute ọnọdụ ndị a ụzọ mgbe ha na -azụlite:
mmefu ego teknụzụ ahịa
Strategic marketing atụmatụ
Ngwá ọrụ nyocha na nyocha
Nweta talent na mmepe ndị ọrụ
Ndị ụlọ ọrụ ga -eme mgbanwe nke ahịa dijitalụ na ahịa ha ngwa ngwa site na itinye teknụzụ azụmaahịa egosipụtara.
Tags: aiAnalyticsAmamịghe echichennukwu dataumuosisiọgụgụ isi azụmahịankataikpochapudashboardnchịkọta datamgbanwe ntanetịgoogleahia mmefu egotalent ahịateknụzụ ahịausoro teknụzụ ahịa ahịankataọnọdụ martechmkpanaka ọchụchọmobile-mbụnhazi asụsụNlpnyocha olu
Pavel Obod bụ onye ọchụnta ego, onye guzobere Ụlọ ọrụ Sloboda Studio, na onye na-etinye ego na ụlọ. Ọ na -enwe mmasị ijikọ ndị ọchụnta ego wee malite ọtụtụ klọb azụmahịa maka ndị isi, ahịa na ndị na -ahụ maka ọrụ na Ukraine na Belarus.
Otu esi eburu ụzọ na -eche echiche na AI na -ebelata nhazi data enweghị isi